Nagarik News - जियाको जाँच
दर्जन फिल्ममा काम गरे पनि चर्चित बन्न नसकेका हिरोइन थुप्रै छन्। तर, एउटै फिल्म हलमा नलागे पनि चर्चित बन्न सफल भएकी हिरोइन हुन्, जिया केसी। हट फोटोसुट, भुवन केसीसँग अफेयर र फिल्मको प्रोमामा देखिएको उत्तेजक दृश्यले नै उनलाई 'हटकेक' बनाइदियो। त्यसैले उनले काम गरेको पहिलो फिल्म 'एटिएम'मा सदाका लागि ताला लाग्दा उनको करिअरको ढोका भने खुलेको खुल्यै भयो।
त्यसपछि उनले अभिनय गरेको अर्को फिल्म 'बर्बाद' पनि निर्माताका लागि बर्बादै साबित भयो। किनकि सेन्सर बोर्डले सेन्सर गर्न मानेको छैन। हलमा नलाग्ने फिल्मकी यी हिरोइनको एउटा फिल्म भने रिलिज हुने भएको छ। फिल्म 'हो यही माया हो' मार्फत जिया हलमा देखिन पाउने भएकी हुन्। बाहिरै नानाथरी गरेर हिट भएकी उनको यो हप्ता फिल्म होइन, जाँच आउने भएको छ। किनभने दर्शकले अब खुट्याउनेछन्, यी उपद्रो गर्न मात्रै जान्दछिन् कि अभिनय पनि गर्छिन्।
सेतो पर्दा: अभिनय गरेर अर्बपति बनिँदैन
नेपालमा धेरैजसो निर्माता पैसा कमाउनुपर्छ भन्दै तथाकथित कमर्सियल फिल्म बनाउने गर्छन्। कलाकारले पनि पैसा कमाउन धेरैभन्दा धेरै फिल्म खेल्नुपरेको तर्क दिन्छन्। जबकि विश्वकै फिल्म क्षेत्रको अध्ययनले देखाउँछ, फिल्मबाट पैसा कमाउन...
केही गर्छन् है विमलले!
तीन वर्षअघि बुटवल एकेडेमीबाट काठमाडौँ आएका विमल अहिले युरोपियन क्लबमा आफ्नो स्थान बनाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। फुटबल विवादमा तानिइरहेका बेला विमलले युरोप गएर नेपाली खेलकुदलाई नै सुखद अनुभूति दिलाइरहेका छन्।...
पपुलर डेब्यू अभिनेत्री अवार्ड प्रियंका कार्कीका लागि ढिलो भयो किनभने यो अवार्ड पाउने अवस्थासम्म आइपुग्दा उनी पपुलर हिरोइनकै क्याटगोरीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भइसकेकी थिइन्। एउटै फिल्म हिट नहुँदा पनि 'पपुलर' भएकी...
एक घुम्ती, एक पात्र: गुड लक, जस्मिन !
हामी दरबारमार्गको महँगो रेस्टुरेन्टमा छौँ। त्यहाँ यौनधन्दाको बार्गेनिङ हुन्छ भनेर धेरैले पत्याउँदैनन्। काठमाडौँ जति एडभान्स्ड हुँदैछ, त्यति नै यहाँको यौनबजार पनि। यो देशको सरकारी क्षेत्रको उच्च ओहदाका कर्मचारी रहेका मेरा...
दुई सफल सुन्दरी
आफू 'मिस इन्डिया' भएको बीसौँ वर्षगाँठ अभिनेत्री सुस्मिता सेनले धुमधामसँग मनाइन्। उनले सन् १९९४ मा 'मिस इन्डिया' को उपाधि जितेकी थिइन्। त्यतिबेला उनी मात्र १८ वर्षकी थिइन्।
कोकाकोला ज्यानका लागि कसरत
'कोकाकोला ज्यान'– अशिष्मा नकर्मीका लागि बनाइएको गीत हो यो। निर्माण क्रममा रहेको फिल्म 'अधकट्टी'मा राखिने यो गीतमा अशिष्माले 'कोकाकोला ज्यान' देखाउनुपर्नेछ। यो चुनौती उनलेे सहर्ष स्विकारेकी छिन्।
श्रमग्राममा सूचना केन्द्र
गैरआवासीय नेपाली संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई गन्तव्य मुलुकबारे सही सूचना उपलब्ध गराउन श्रमग्राम ताहाचलमा वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।